Sida loo kiciyo loona isticmaalo WhatsApp Web ee loogu talagalay iPhone, HAGAHA | Wararka IPhone
Shabakadda WhatsApp ee loogu talagalay iPhone, hage sugan
Maanta waxaan nafteena u oggolaaneynaa raaxada ah inaan gacan u siino dhammaan kuwa aan wali aqoon WhatsApp Web, macmiilka isku dhufashada badan ee WhatsApp ee adeegsada biraawsarkayaga marwalba inuu nagala xiriiro xiriiro aan la leenahay macmiilka fariin deg deg ah loo isticmaalo, tan iyo sidii aan shalay u shaacinay , WhatsApp horey ayey u gaadhay tirada 900 milyan oo isticmaale firfircoon. Waa maxay dariiqa ka wanaagsan ee loo dabbaaldego marka laga caawiyo inaad xiriir badan la yeelato haddii ay suurtagal tahay?, ha moogaanin tilmaantan oo aan kuu sheegi doono waxa ka soo baxa iyo wixii ka baxa WhatsApp Web, waan xallin doonaa shakigaaga sidoo kalena waxaan kaa caawin doonaa inaad sida ugu badan uga faa'iideysato shaqadan WhatsApp.
1 Waa maxay WhatsApp Web?
2 Soo Degso Shabakadda WhatsApp
3 ChitChat, Codsiga Webka WhatsApp ee Mac OS
4 Sida loo isticmaalo shabakadda WhatsApp
5 Shabakada WhatsApp ma nabadbaa?
6 Miyaad isticmaashaa batari badan?
Waa maxay WhatsApp Web?
Waxay kuxirantahay qofka aad weydiiso ayaa kaaga jawaabi kara inay tahay shey, ama qaabka cusub ee WhatsApp looga saaray koofiyada si ay noogu ogolaato inaan sidoo kale u isticmaalno WhatsApp kombuyutarkayga ama kaniiniyada. Natiijadu waxay tahay macmiil WhatsApp ah oo lagu weheliyo aaladdeenna shabakadda shabakadda taasna waxay noo oggolaanaysaa inaan la sheekaysano dadka aan la xiriirno iyadoo la adeegsanayo aaladda moobil ahaan adeeg ahaan. Tan awgeed waa lagama maarmaan in qalabkeenu si buuxda loo heli karo, maadaama uusan ka duwanayn Telegram, Shabakadda WhatsApp ma adeegsato dariiqa isku xirka xogta, laakiin adeegu wuxuu noqon doonaa qalabkeena.
Faahfaahintaan ugu dambeysa ayaa ah tan dhalisay muranka ugu badan, runtii waa sababta keentay in nooca WhatsApp Web ee iOS-ka ah uu dib u dhaco
Soo Degso Shabakadda WhatsApp
Shabakadda WhatsApp ma ahan "mid la soo dejisan karo", taasi waa, waxaan ku sii wadaynaa suurtagalnimada calaamadaha xigashada, maaddaama WhatsApp Web uu yahay shaqo ku saleysan biraawsarka webka, si loo isticmaalo WhatsApp Web waa inaan si fudud u galnaa cinwaanka "https://web.whatsapp.com" halkaasoo waxaa la tusi doonaa macmiilka iyo tilmaamaha ay tahay inaan raacno si looga faa'iideysto astaantan. Marka, haddii aad isticmaasho PC ama Linux ka carar barnaamijyada WhatsApp iyo macaamiisha suurto galka ah iyaga u gaar ah, maadaama intooda badani yihiin wax aan ka badnayn fayras iyo malware oo ujeedkoodu yahay oo keliya inay uga faa'iideystaan ​​dambi la'aantaada inay ku dhacaan.
Si kastaba ha noqotee, Mac OS X waxaan awood u leenahay inaan soo dejino macmiil Websaydh ah oo gaar ah, oo loo yaqaan 'ChitChat ama WhatsMac', waa codsi u gaar ah, oo noo oggolaan doona inaan ka dhigno biraawsar la'aan adeegsiga WhatsApp Web, fududeynta nidaamka oo na siinaya xorriyadda ay na siiso, ka dib waan ka hadli doonnaa.
ChitChat, Codsiga Webka WhatsApp ee Mac OS
Codsigan gebi ahaanba waa bilaash, Aad u fududahay isticmaalka oo waxay leedahay taageero ka dambeysa taas oo ku siinaysa cusbooneysiin joogto ah. Waxaan isticmaalay codsigan tan iyo markii la aasaasay waxayna muujineysaa natiijooyin wanaagsan, oo noo ogolaanaya inaan keydino batteriga furaha furan furan u isticmaalo WhatsApp Web, iyo sidoo kale fursadaha macmiil kaligiis ah, sida barnaamijka Telegram ee Mac OS X.
En maqaalkan Waxaan si qoto dheer uga wada hadalnay ChitChat, waxaadna ka heli kartaa xiriiriyeyaasha soo degsashada ka faa'iideyso WhatsApp Web ka Mac, dhaqso iyo raaxo badan aan macquul ahayn.
Sida loo isticmaalo shabakadda WhatsApp
Nidaamku waa iska fudud yahay, laakiin wali waxaan u sharaxeynaa sida ugu yar ee suurtogalka ah, kuwa weli shaki nooc kasta ah ka qaba, tilmaamahan tallaabo-tallaabo ayaa kuu oggolaan doona ku xir WhatsApp-kaaga iPhone-ka WhatsApp Webka si aad waxqabadka oo dhan uga hesho kumbuyuutarkaaga, kordhinta wax soo saarkaaga iyo raaxadaada.
Waxaan dhaqaajineynaa Shabakada WhatsApp, tan waxaan ugu tagnaa arjiga WhatsApp ee ku jira iPhone-ka, iyo Settings (hoosta hoose ee hoose) WhatsApp Web ayaa u muuqan doona si fudud oo la arki karo.
Waxaan galnaa qaybtaas dejinta oo guji «iskaan QR code»Ka dib markaad dhaqaajiso biiro.
Hadda waxaan tagnaa websaydhka «https://web.whatsapp.com»Meesha ay ka muuqan doonto QR code, kuwa isticmaali doona ChitChat (WhatsMac) sidoo kale waxay arki doonaan lambar QR u dhigma.
Waxaan iskaanineynaa nambarka QR ee naloo muujiyey oo si toos ah ayuu ula qabsan doonaa iPhone-keena WhatsApp Web.
Shabakada WhatsApp ma nabadbaa?
Weli kama hayno macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan, shaki la'aan, xilligii ugu horreeyay ee la bilaabay, waxaa jiray xoogaa dhibaatooyin xagga amniga ah oo u oggolaanayay, tusaale ahaan, helitaanka sawirrada wada-hadalka, hase yeeshe, waa amaan sida hababka kale ee la midka ahMaanta ma heli karno hab fariin kasta oo loo arko inay gebi ahaanba ammaan tahay, mana lihin xulasho aan ka ahayn is-casilaadda. Si kastaba ha noqotee, tani maahan inay kaa horjoogsato inaad isticmaasho, had iyo jeer jawiga amniga caadiga ah ee ay tahay inaad isticmaasho nooc kasta oo software ah.
Miyaad isticmaashaa batari badan?
Xaqiiqdii waxay u baahan tahay kharash batari ka sarreeya kan ka soo baxa Telegram tusaale ahaan, maadaama aysan u adeegsanayn isku-xirnaanta daruurta, laakiin iPhone-keena ayaa ah server-ka laftiisa. Si kastaba ha noqotee, ha fileynin isticmaal la mid ah waxaad sameyn karto markii aad sida caadiga ah WhatsApp uga isticmaasho iPhone-kaaga. Waa run in cunitaanku badan yahay, laakiin maahan maxaa yeelay macno ahaan waa sidaas, laakiin maxaa yeelay waa inay aad uga yaraataa, laakiin ragga WhatsApp waxay go'aansadeen inay adeegsadaan qaabkan gaarka ah si loogu beddelo WhatsApp qaab-dhismeed isku mid ah mana lihin xulasho aan ka ahayn is-casilaadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Shabakadda WhatsApp ee loogu talagalay iPhone, hage sugan
Oo halkan waxaan ku haynaa hage waxa AAN la sameyn karin marka la abuurayo codsi, maaddaama WhatsApp Web uu yahay bot ugu weyn ee jiri kara. (laakiin waan kugu hambalyeynayaa qoraalka)
Telegram gebi ahaanba waa aamin ugu yaraan muuqaalkiisa qarsoodiga ah ee Wadahadalka.
Waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaad isla sameysaan (tilmaan bixin) laakin Telegram-ka aad si hubaal ah uga heli doontaan wax badan oo sidaas darteedna aad u soo bandhigi doontaan wax yar si aad indhihiina u kala furtaan.
@Marc Waxaan u maleynayaa in xitaa haddii aan xayeysiiyo Telegram, cudurka myoria uu ku sii badan doono whats, why? Hagaag, waa u fududahay xayeysiinta iyo waxa ay ku sameysay su'aasha in shirkad kasta oo aad dib ugu soo celiso miisaan aad u badan ama aad qorshe leedahay, waxay ku siinayaan whsta aan xadidneyn, facebook, twitter. Dabcan, 3-daan codsi waxay leeyihiin adeegsi badan oo xog ah maxaa yeelay dhammaantood waxay ku haystaan ​​bilaash, haddii aan horey u ogaa in Telegram-ka haddii aad ku haysato PC-gaaga uusan qashin doonin batteriga ama xogta.
Dhamaan isticmaaleyaashaydu waxay leeyihiin whsta, waxay la mid yihiin qofkasta oo aan u sheego telegram-ka oo kaliya maahan, 😀 si fiican….
Ma fahmin macnaha gelinta websaydhka whatsapp-ka iPhone-ka. On iPad-ka waan ku fahmay laakiin iPhone-ka !!!
Maxaa waqti lumis ah
Ku jawaab Clhaudio
9 timo dijo
taasina waxay cuntaa megabytes !!!! maxay xashiish tahay !!!
Sidee culus dijo
Telegram nooloow !! Sug, cid ila xiriirtay midkoodna ma haysto markaa hadda waxaan la hadli karaa naftayda oo keliya…. Ugu yaraan wixii aan qof kula hadli karo
Kujawaab Que culusyoos
Haddii aan cusbooneysiiyo shabakadda whatsaapp miyaan iskaan karaa whatsaapp-kayga si fariimaheyga ay iigu ekaadaan taleefanka gacanta kale?
Sida loo istcimaalo Anemone: beddelka looxa jiilaalka ee loogu talagalay iPhone-kaaga
Dib u eegista Loop Rasmiga Rasmiga ah ee Apple